ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆုတောင်းအစည်းအဝေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒေါက်တာ Lin ၏သွန်သင်ချက်များ | Dr. Lin’s Teachings on Prayer and Prayer Meetings | Real Conversion
ဒေါက်တာ Lin ၏သွန်သင်ချက်များ
မေလ ( ၂၉ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
“လူသားသည် ကြွလာသောအခါ ယုံကြည်ခြင်းကို မြေကြီးပေါ်မှာ တွေ့မည်လောဟု သခင်ဘုရားသည် မိန့်တော်မူ၏။” ( (လုကာ ၁၈း ၈)
အနက်ဖွင့်ကျမ်းများစွာက ဤနေရာတွင် မှန်ကန်စွာ အနက်ဖွင့်နိူင်ခြင်းမရှိကြချေ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူသိများသည့်အနက်ဖွင့်ကျမ်းတစ်ခုက “မြေကြီးတစ်ခွင်လုံးတွင်ဖြစ်ပျက်မည့် ယေဘုယျအခြေအနေသည် မယုံကြည်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်” ဟု ဆိုထားပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိုအကြောင်းအရာမှာ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ယေရှုက မိန့်တော်မူထားသည်မဟုတ်ပါ။ ယေရှုက နောက်ဆုံးသောကာလတွင် ပေါ်လာမည့်မှားယွင်းသောအယူဝါဒ၏ယေဘုယျအခြေအနေကို တင်ပြထားခြင်းလည်းမဟုတ်သကဲ့သို့ သူပြန်လည်ကြွလာသောအချိန်တွင် စစ်မှန်သောခရစ် ယာန်များရှိမရှိ မေးခွန်းထုတ်နေခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ ယေရှုက ပေတရုနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တရားကို ပြောနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
“ဤကျောက်ပေါ်မှာ ငါ့အသင်းတော်ကို ငါတည်ဆောက်မည်။ထို အသင်းတော်ကို မရဏာနိူင်ငံ၏တံခါးတို့သည် မနိူင်ရာ။” (မဿဲ ၁၆း ၁၈ ) )
အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး “သရဖူများနှင့်ပလ္လင်ပျက်စီးလိမ့်မည်” ကို သီဆိုကျူးဧကြပါစို့။ ၎င်း သည် သင်တို့ရဲ့သီချင်းစာရွက်ထဲတွင် စာမျက်နှာ ၄ အပိုဒ် လေးတွင် တွေ့ရနိူင်ပါသည်။
(“ခရစ်ယာန်စစ်သည်တို့ချီ၊” Sabine Baring-Gould, ၁၈၃၄- ၁၉၂၄).
မဿဲ ၁၆း ၁၈ က မှားယွင်းသောအယူဝါဒသည် မည်မျှနက်ရှိုင်းပြီး ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေ ခရစ်တော်ပြန်လာသောအချိန်တွင် ကယ်တင်နိူင်သောယုံကြည်ခြင်းပိုင် ဆိုင်ထားသည့် ခရစ်ယာန်များစွာရှိနေဦးမည်အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသထားပါသည်။ စစ် မှန်သောခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် အထူးသဖြင့် ယနေ့အချိန်ကာလတွင် နိူးထမှုအမှန် တကယ်ဖြစ်ပွါးရာ တရုတ်နိူင်ငံနှင့်အခြားတတိယနိူင်ငံများရှိ ခရစ်ယာန်များသည် ချီဆောင် ခြင်းကာလတွင် ပါဝင်ကြမည်။
“သခင်ဘုရားသည် ကြွေးကြော်ခြင်း၊ ကောင်းကင်တမန်မင်းအသံ ပေးခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏တန်ပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွ၊ ကောင် ကင်ဘုံမှ ကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍၊ ခရစ်တော်၌သေလွန် သောသူတို့သည် အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ ထိုအခါ အသက် ရှင်၍ ကျန်ကြွင်းသောငါတို့သည် အာကာသကောင်းကင်၌ သခင် ဘုရားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းငှါ၊ ထိုသူတို့နှင့်တကွ မိုဃ်းတိမ် ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကို ခံရသောအားဖြင့် သခင်ဘုရားနှင့်အတူ အစဉ်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်။” (၁ သက် ၄း ၁၆- ၁၇ ) )
ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်းတွင်ပင် လူများစွာတို့သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြပါ လိမ့်မည်။
“အသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောသော လူအမျိုးအနွယ်ခပ်သိမ်း တို့အထဲမှထွက်၍၊ အဘယ်သူမျှမရေတွက်နိူင်သော လူများအ ပေါင်းတို့သည်။” (ဗျာဒိတ် ၇း ၉ ) )
“ဤသူတို့သည် ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခအထဲက ထွက်မြောက်၍၊ မိမိတို့ဝတ်လုံကို သိုးသူငယ်၏အသွေး၌လျှော်၍ ဖြူစေသောသူ ဖြစ်ကြသတည်း။” ( (ဗျာဒိတ် ၇း ၁၄ ) )
ထို့ကြောင့် ယေရှုက ဤသို့မိန့်ဆိုသောအခါ ပြန်လာချိန်၌ ကယ်တင်နိူင်သောယုံ ကြည်ခြင်းမရှိတော့မည်အကြောင်း ပြောဆိုနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
“သို့သော်လည်း လူသားသည် ကြွလာသောအခါ ယုံကြည်ခြင်းကို မြေကြီးပေါ်မှာ တွေ့မည်လောဟု ဘုရားသခင်သည် မိန့်တော်မူ ၏။” (လုကာ ၁၈း ၈ ) )
ကျွန်ုပ်၏ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် သင်းအုပ်ဖြစ်တော်မူသော ဒေါက်တာ Timothy Lin (၁၉၁၁- ၂၀၀၉) သည် သမ္မာကျမ်းစာကို ကောင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်သူဖြစ်ပါ သည်။ သူသည် ဟေဗြဲဘာသာနှင့် အမျိုးတူသောဘာသာစကားတွင် ဒေါက်တာဘွဲ့ကို ဆွတ် ခူးသောသူဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်၌ Bob Jones University တွင် ကျောင်းဘွဲ့ယူသည့်အ ချိန်၌ စနစ်ကျသောသီဪလော်ဂျီ၊ ကျမ်းစာနှင့်ဆိုင်သောသီဩလော်ဂျီ၊ ဓမ္မဟောင်းဟေဗြဲ ဘာသာ၊ ကျမ်းစာနှင့်ဆိုင်သောအာရာမစ်ဘာသာ၊ အဆင့်မြင့်အာရာမစ်ဘာသာ၊ ပစ်ဆီတာ ဆီးရီးယားဘာသာတို့ကို သင်ကြားပေးပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူသည် တရုတ်ဧဝံဂေလိ ကျမ်းစာကျောင်းတွင် ဒေါက်တာ James Hudson Taylor ၃ ၏ ရာထူးကိုဆက်ခံလျက် ကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
ဒေါက်တာ Lin က ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေပြုကျမ်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး စစ်မှန်သော အနက် ပြန်မှုကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
“သို့သော်လည်း လူသားသည် ကြွလာသောအခါ ယုံကြည်ခြင်းကို မြေကြီးပေါ်မှာ တွေ့မည်လောဟု ဘုရားသခင်သည် မိန့်တော်မူ ၏။” ( (လုကာ ၁၈း ၈ ) )
၁။	ပထမအချက်၊ ဆက်တိုက်ဆုတောင်းခြင်း၏အရေးကြီးမှု။
ဒေါက်တာ Lin သည် အမေရိကန်အခြေစိုက်ကျမ်းစာကျောင်းများတွင် သင်ကြားပေး သည့် ကျမ်းစာပညာရှင်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်နည်းတူ Taiwan ရှိ တရုတ်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာ ကျောင်း၏ ကျောင်းအုပ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။ သူသည် New American Standard Bible (NASB) သို့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ဘာသာပြန်ဆိုသူများတွင် တစ်ဦးအပါအဝင်လည်းဖြစ်ပါ သည်။ ဒေါက်တာ Lin သည် နှစ်ပေါင်း လေးဆယ့်လေးနှစ်ကြာ ကျွန်ုပ်၏ သင်းအုပ်ဆရာ လည်းဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာ Lin သည် သိခဲ့ဖူးသမျှသောသင်းအုပ်များထဲတွင် ထိရောက်မှု အရှိဆုံးသင်းအုပ်ဖြစ်သည်ကို မေးခွန်းထုတ်စရာမလိုဘဲ ပြောနိူင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် သူ့အ သင်းသားဖြစ်စဉ်အခါက ရာပေါင်းများစွာသောသူတို့ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီး အသင်း တော်ထဲသို့ဝင်လာစေသည့် နိူးထမှုကြီးတစ်ခု ဘုရားသခင်က စေလွှတ်သည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရ ပါသည်။ ဒေါက်တာ Lin က ဤသ်ို့ဆိုထားပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် “ယုံကြည်ခြင်း” ဟူသောစကားကို ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုထားပါသည်။ ၎င်း၏တိကျသေချာသောအ ဓိပါယ်ကို ၎င်း၏အကြောင်းအရာတိုင်းကို လေ့လာဆင်ခြင်ခြင်း အားဖြင့်သာ သတ်မှတ်နိူင်ပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်မတိုင်မှီအကြောင် အရာမှာ သာဓကဖြစ်သည်။ စိတ်နှလုံးကို ဆုံးရှုံးလွတ်လပ်ခွင့်ကို ပေးခြင်းမရှိဘဲ အချိန်တိုင်းဆုတောင်းသင့်သည်အကြောင်း ပြသ လျက်ရှိသည်။ (လုကာ ၁၈း ၁- ၈က ) အခြေပြုထားသည့်ကျမ်း ပိုဒ်နောက်တွင်လိုက်လာသည်မှာ(လုကာ ၁၈း ၉- ၁၄ ) ဖာရိရှဲနှင့် အခွန်ခံတို့၏ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်း သာဓကပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ဤကျမ်းပိုဒ်၏အကြောင်းအရာမှာ (လုကာ ၁၈း ၈ ) “ယုံ ကြည်ခြင်း” ဟူသောစကားလုံးသည် ဤနေရာတွင် ဆုတောင်း ခြင်းတွင်ရှိသောယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းရှင်း လင်းလင်းပြသထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အရှင်ဘုရား၏ဖော်ပြချက် မှာ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းမတိုင်မှီအချိန်လေးတွင် ၎င်း၏အ သင်းတော်သည် ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းနှင့်ဆိုင်သောယုံကြည် ခြင်းကို ဆုံးရှုံးကြမည်စိုး၍ မြည်တမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ (Timothy Lin, Ph.D., အသင်းတော်ကြီးထွားခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်၊ လော့ အိန်ဂျယ်လ်ရှိတရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊၁၉၉၂၊ စာ- ၉၄- ၉၅ )
ဒေါက်တာ Lin က လုကာ ၁၈း ၁- ၈ တွင် ဖော်ပြထားသော သာဓက၏ အချက်မှာ ခရစ်ယာန် များသည် အားနည်းခြင်းမရှိပါဘဲ ဆက်တိုက်ဆုတောင်းသင့်ကြောင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ အပိုဒ်ငယ်ရှစ်က ခရစ်ယာန်များသည် နောက်ဆုံးသောကာလ၊ ကျွန်ုပ်တို့ယခုအသက်ရှင်နေ သောအချိန်ကာလတွင် ဆုတောင်းခြင်းတွင် တည်ကြည်သောယုံကြည်ခြင်း ရှိကြမည်မဟုတ် ဟုဆိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် အခြေပြုကျမ်းတွင် အောက်ပါအတိုင်းဆိုခြင်းအားဖြင့် သုံးသပ်မှု တွေလုပ်ဆောင်နိူင်ပါသည်။
“သို့သော်လည်း လူသားသည် ကြွလာသောအခါ ယုံကြည်ခြင်း၌ (အားမလျော့ဘဲ ကြိုးစား၍ဆုတောင်းသောသူသည် )မြေကြီးပေါ် မှာ တွေ့မည်လော။” ( (လုကာ ၁၈း ၁၊ ၈ ) )
ဒေါက်တာ Lin က အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက်ဆိုထားပါသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် အသင်းတော်များစွာတို့၏ဆုတောင်းခြင်းအစီအ စဉ်သည် လူသူကင်းမဲလျက်ရှိကြသည်။ (သို့မဟုတ် ရက်သတ္တ ပတ်အလယ်ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်သို့ ဆုတောင်းခြင်းတစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ပြောင်းလဲသွားသည်။) ထိုကဲ့သို့ဝမ်းနည်းဖွယ် ကောင်းသောအခြေအနေကို ကြုံတွေ့ရခြင်းသည် များစွာသောအ သင်းတော်များက အရေးကြီးသည့်သတိပေးထားချက်များနှင့် ၎င်း တို့၏အလိုပြည့်ဝဖို့ကို ဦးစားပေးပြီးမိမိတို့အလိုလိုက်ခြင်းတွင် ဆု တောင်းခြင်းအစီအစဉ်ကို အတူတကွ ပယ်ဖျက်ကြပါသည်။ ထိုအ ကြောင်းအရာများက သခင်ဘုရား၏ပြန်လည်ကြွလာခြင်းနေ့ရက် သည် အလွန်နီးကပ်နေပြီဟူသောနိမိတ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယခု ခေတ်တွင် အသင်းတော်ဝင်အများစုသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုး ကွယ်သည်ထက် ရုပ်မြင်သံကြားကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ တ ကယ့်ဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်အပျက်ပင်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးသော ကာလတွင်ရှိသောအသင်းတော်များသည် ဆုတောင်းခြင်းအစီအ စဉ်ထဲက ရုန်းထွက်သွား(စိတ်ဝင်းစားမှုနည်းပါးမှု) ကြပါသည်။ (Timothy Lin, Ph.D., ၎င်း၊ စာ-၉၅ )
ထို့နောက် လုကာ ၁၈း ၈ က ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွမလာမှီ အသင်းတော်များ၌ ဆု တောင်းခြင်းကင်းမဲ့ခြင်းပုံရိပ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေသောအချိန်ကာလ၏နိမိတ်ပုံရိပ်၊ ဆု တောင်းခြင်းပုံရိပ်၊ ကယ်တင်နိူင်သောယုံကြည်ခြင်း၏ မစုံလင်သောလိုအပ်ချက်တို့ကို ပေး ထားလျက်ရှိပါသည်။ အသင်းတော်များ၌ ဆုတောင်းခြင်းမရှိခြင်းသည် သခင်ခရစ်တော်ပြန်မ လာမှီ နောက်ဆုံးသောကာလတွင် အသက်ရှင်နေကြကြောင်း နိမိတ်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။
“သို့သော်လည်း လူသားသည် ကြွလာသောအခါ ယုံကြည်ခြင်းကို မြေကြီးပေါ်မှာ တွေ့မည်လောဟု ဘုရားသခင်သည် မိန့်တော်မူ ၏။” ( လုကာ ၁၈း ၈ ) )
“ဆုတောင်းရန်သွန်သင်မူပါ” သီချင်းကို သီဆိုကြပါစို့။
ဆုတောင်းရန်သွန်သင်မူပါ ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ကို သွန်သင်ပါ၊
(“ဆုတောင်းရန် သွန်သင်မူပါ” Albert S. Reitz, ၁၈၇၉-၁၉၆၆).
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ဆုတောင်းအစည်းအဝေးအရေးကြီးမှု။
ဒေါက်တာ Lin က ဆုတောင်းခြင်းအစည်းအဝေးတွင် တစ်ဦးချင်း၏ဆုတောင်းခြင်း သည် အဖွဲ့လိုက်ဆုတောင်းခြင်း၏အခွင့်အာဏာနှင့်အစွမ်းတန်ခိုးကဲ့သို့တန်ခိုးအစွမ်းမျိုးမရှိဟု ညွှန်းဆိုထားပါသည်။ သူက ဤသို့ဆိုပါသည်။
သင်သည် တစ်ဦးချင်းသော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့လိုက်သော်လည်း ကောင်း ဆုတောင်းသော်လည်း အကျိုးမရှိ။ အိမ်၌တစ်ယောက် တည်းဆုတောင်းသော်လည်းကောင်း၊ ဘုရားကျောင်း၌ ညီအစ်ကို မောင်နှမများနှင့်အတူတကွ ဆုတောင်းသော်လည်းကောင်း ခြား နားမှုလုံးဝမရှိဟု လူတွေက မကြာခဏပြောလေ့ရှိကြပါသည်။ ထို သို့သောဖော်ပြချက်သည် ပြင်းရိခြင်းသဘော သို့မဟုတ် ဆု တောင်းခြင်းတန်ခိုးကို ငြင်းဆန်သူတစ်ဦး၏ကိုယ်ထောက်ခံသော အရာကို ရှင်းပြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့သောဆုတောင်းခြင်း သဘောတရားနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ငါတို့သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသော အရာကို ကြည့်ရှုလေ့လာပါ။
“တဖန်ငါဆိုသည်ကား၊ မြေကြီးပေါ်မှာ သင်တို့တွင် နှစ် ယောက်တို့သည် သဘောချင်းတူ၍ဆုတောင်းလျှင်၊ တောင်းသမျှသောဆုတို့ကို ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသမျှ သော ငါ၏ခမည်းတော်သည် ပေးတော်မူလတံ့။ အ ကြောင်းမူကား၊ အကြင်အရပ်၌ လူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည် ငါ၏နာမကိုထောက်၍ စည်းဝေးကြ၏။ ထိုအရပ်၌ သူ တို့အလယ်မှာ ငါရှိသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” ( (မဿဲ ၁၈း ၁၉- ၂၀ ) )
ဘုရားသခင်၏ဤအခွင့်အာဏာအသုံးချခြင်းသည် တစ်ဦး ချင်းစီ၏ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့် လုံး၀အောင်မြင်မည်မဟုတ် ကြောင်း အသင်းတော်တစ်ခုလုံးပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သာ အောင်မြင်မှုဟူသည် ရရှိမည်အကြောင်း သခင်ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့ အား သတိပေးထားပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော် အသင်း တော်တစ်ခုလုံးသည် တညီတညွှတ်တည်းဆုတောင်းလာကြသော အခါ အသင်းတော်သည် ထိုသို့သောအခွင့်အာဏာကို အကျိုးရှိစွာ ရရှိလာကြမည်ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် နောက်ဆုံးသောကာလတွင်ရှိသောအသင်းတော် သည် ဤသမ္မာတရား၏အမှန်တကယ်တည်ရှိခြင်းအကြောင်းကို လုံးဝမမြင်နိူင်ပါ။ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ကို (အမှန်တကယ် ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း) ကောင်းမွန်သည့်အစီအစဉ်ကိုလည်း သတိ ရခြင်းမရှိပေ။ အလွန်ပင် ဆုံးရှုံးသောသူများဖြစ်ကြပါသည်တ ကား။ အသင်းတော်ဟူသည်မှာ စီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်လိုအပ်သော အသိပညာကို ရရှိသည်မဟုတ်၊ ကောင်းကင်ဘုံက အခွင့်အာဏာ ကို ရရှိထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အနင်းပြားခံခြင်းမှလွတ် မြောက်ပြီး ဘုရားသခင့်မျက်မှောက်တော်၏အမှန်တကယ်တည်ရှိ ခြင်းအကြောင်းကို ထိတွေ့ခံစားနိူင်ရန် စာတန်၏လုပ်ဆောင်ချက် များကို ချည်နှောင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအမှုသည် ပြီးဆုံးနိူင်မည့် အရာမဟုတ်ပါ။ (Timothy Lin, Ph.D., ၎င်း၊ စာ-၉၂-၉၃ ) )
ထို့ကြောင့် ဒေါက်တာ Lin က ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောယုံကြည်ခြင်း၏အရေးပါမှု၊ အသင်း တော်ဆုတောင်းအစည်းအဝေး၏ အရေးပါမှုအကြောင်းကို သွန်သင်ထားပါသည်။ အားလုံး မတ်တပ်ထပြီး “ဆုတောင်းရန်သွန်သင်မူပါ” တေးသီချင်းကို ကျူးဧကြပါစို့။
၃။	တတိယအချက်၊ “တညီတညွတ်တည်း” ဆုတောင်းခြင်း၏အရေးပါမှု။
တမန်တော် ၁း ၁၄ ကို ကြည့်ပြီး အားလုံးကျယ်လောင်စွာ ဖတ်ရှုကြပါစို့။
“ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ယေရှု၏မယ်တော်မာရိမှစ၍ မိန်းမတို့နှင့် ၎င်း၊ ညီတော်တို့နှင့်၎င်း၊ တညီတညွှတ်တည်းကြိုးစား၍ ဆု တောင်းပဌနာပြုလျက်နေကြ၏။” ( တမန် ၁း ၁၄ ) )
“ဤအရာအားလုံးသည် တညီတညွတ်တည်းဆုတောင်းခြင်းနှင့်တောင်းလျှောက်ခြင်းတွင် ဆက်လက်ဖြစ်တည်လာသည်။” ဒေါက်တာ Lin က ဤသို့ဆိုပါသည်။
တရုတ်ကျမ်းစာပြန်ဆိုခြင်းတွင် “တညီတညွတ်တည်း” ကို “စိတ်နှ လုံးသဘောတူလျက်” ဟု ပြန်ဆိုထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရား သခင်၏မျက်မှောက်တော်သို့ရောက်သော ဆုတောင်းခြင်းအစီအ စဉ်တွင် ဆုတောင်းခြင်းတွင်ပါဝင်သောသူတိုင်းက ဆုတောင်းခြင်း ၏အရေးပါမှုကိုနားလည်ရန် လိုအပ်သည်သာမက၊ စိတ်နှလုံး သဘောတူလျက် တောင်းလျှောက်ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ အသ နားခံခြင်း၊ ဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြုရန် ရိုး သားသောစိတ်နှလုံးဖြင့် အထံတော်သို့ရောက်လာရမည်။ ဆု တောင်းခြင်းအစီအစဉ်သည် အောင်မြင်မှုရှိနေသ၍ အခြားအမှု တော်လုပ်ငန်းများသည်လည်း အောင်မြင်မှုကို ရရှိနေမည်ဖြစ် သည်။ (Timothy Lin, Ph.D., ၎င်း၊ စာ- ၉၃- ၉၄ )
“တညီတညွတ်တည်းဆုတောင်းခြင်း”မှာ အားလုံးက ဆုတောင်းခြင်းတွင် ညီအစ်ကို တစ်ဦးက ဦးဆောင်သကဲ့သို့ အားလုံးက အတူတကွ “အာမင်” ဟု ဆိုရမည်။ အားလုံးက “အာမင်” ဟုဆိုသောအခါ “တညီတညွတ်တည်း”ဆုတောင်းခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည။်
ဆုတောင်းခြင်း၍ယုံကြည်ခြင်းအရေးပါမှု၊ အသင်းတော်ဆုတောင်းခြင်းအစည်းအဝေး ၏အရေးကြီးမှု၊ “တညီတညွတ်တည်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့်” ပေါင်းစည်းခြင်း၏အရေးပါမှု အ ကြောင်း ဒေါက်တာ Lin ၏ သွန်သင်မှုကို သင်ကြားခဲ့ရပြီ။ ယနေ့ညတွင်ရှိသော သင်တို့တချို့ မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်ကို တက်ရောက်ဖူးခြင်းမရှိကြပေ။ သင်၏ဝိညာဉ်ရေး ရာမှေးမှိန်နေသည်ကို စိတ်မပူပါနှင့်။ သင်းအုပ်ရေ၊ ယနေ့မှစ၍ ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ပါမည်ဟု ကတိပေးနိူင်သူရှိပါသလား။ မျက်စိမှိတ်ပါ။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်လျှင် လက် မြှောက်ပါ။ သူ၏ကတိတည်နိူင်မည်အကြောင်း ဘုရားသခင်မစဖို့ သူ့အတွက် အားလုံးက ဆု တောင်းကြပါစို့။ (အားလုံးဆုတောင်းပါမည်။)
သင်သည် အမှန်တကယ် မပြောင်းလဲသေးလျှင် အနည်းဆုံး စနေ့နေ့ ဆုတောင်းအစီ အစဉ်တစ်ခုကို တက်ရောက်နိူင်အောင်ကြိုးစားပါ။ မျက်စိမှိတ်ပါ။ စနေညဆုတောင်းအစီအစဉ် တွင် ပါဝင်ပါမည်ဟု အဘယ်သိုက ပြောမည်နည်း။ ကျေးဇူးပြုပြီး လက်ကို မြှောက်ပါ။ ကတိ တည်နိူင်ဖို့အတွက် အားလုံးက သူတို့ကို ဆုတောင်းပေးကြပါစို့။ (အားလုံးဆုတောင်းသည်။)
သင့်အပြစ်ကြွေးဆပ်ရန် ခရစ်တော်သည် ကားတိုင်တွင် အသေခံတော်မူသည်။ သင့် အပြစ်ကို ဆေးကြောရန် အသွေးများသွန်းလောင်းတော်မူသည်။ ကြောက်မက်ဖွယ်အခက်အ ခဲများ၊ ကားစင်ပေါ်သံမှိုရိုက်ထားခြင်း၊ အပြစ်ကိုငြိမ်းအေးစေခြင်းအမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် သေခြင်းမှထမြောက်ခဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏လက်ယာ ဘက်တွင်ထိုင်နေတော်မူလျက် အသက်ရှင်လျက်ရှိသည်။ ခရစ်တော်ထံသို့လာပါ။ အပြစ်ထဲ က ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။
ယနေ့ညတွင် ငါတို့နှင့်အတူရှိပြီး မပြောင်းလဲသောသူများရှိပါရဲ့လား။ သင်၏ပြောင်း လဲခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆုတောင်းပေးစေလိုပါသလား။ မျက်လုံးကို နောက်တဖန် မှိတ် ထားပါ။ လက်မြှောက်ပါ။ သင်၏ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် ဆုတောင်းပေးပါမည်။ သူတို့သည် အပြစ်မှနောင်တရပြီး ခရစ်တော်ထံသို့ပြန်လာကြဖို့၊ အသွေးတော်အားဖြင့် သူတို့အပြစ်ကို ဆေးကြောဖို့ အားလုံးဆုတောင်းကြပါစို့။ သင်၏သီချင်းစာရွက်ထဲရှိ နံပါတ် ၇ “ ဆုတောင်းရန် သွန်သင်မူပါ” အပိုဒ်သုံးပိုဒ်လုံးကို မိတ်တပ်ရပ်သီဆိုကြပါစို့။
လူတို့သည် ဆုံးရှုံးသွားကြ၊ ဝိညာဉ်များပျက်စီးယိုယွင်းကြ၊
(“ဆုတောင်းရန် သွန်သင်ပေးပါ။” Albert S. Reitz, ၁၈၇၉-၁၉၆၆)
ဒေါက်တာ Chan ယနေ့ညတွင် ပြောင်းလဲသောသူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် ဆု တောင်းဦးဆောင်ပေးပါ။ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စကား ပြောလိုလျှင် ဒေါက်တာ Cagan, John Cagan နှင့် Noah Song တို့နောက်သို့လိုက်၍ စုံစမ်း သည့်အခန်းသွားသွားပါ။ သူတို့က သင့်ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပြီး အတူတကွ ဆုတောင်းနိူင်သည့် တိတ်ဆိတ်သောနေရာသို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြပါလိမ့်မည်။
ဝက်စ်ကီးယားတွင် ဒေါက်တာ Lin ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို ဖတ်ရှုရန် ဤနေရာတွင် နှိပ်ပါ။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို မစ္စတာ Abel Prudhomme က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ လုကာ ၁၈း ၁- ၈
"ဆုတောင်းရန်သွန်သင်မူပါ"၊ (Albert S. Reitz, ၁၈၇၉-၁၉၆၆) ရေးစပ်သည်။
ဒေါက်တာ Lin ၏သွန်သင်ချက်များအကျဉ်း
“လူသားသည် ကြွလာသောအခါ ယုံကြည်ခြင်းကို မြေကြီးပေါ်မှာ တွေ့မည်လောဟု သခင်ဘုရားသည် မိန့်တော်မူ၏။”
( (လုကာ ၁၈း ၈ ) )
( (မဿဲ ၁၆း ၁၈၊ ၁ သက် ၄း ၁၆- ၁၇၊ ဗျာဒိတ် ၇း ၉၊ ၁၄ ) )
၁။ ပထမအချက်၊ ဆက်တိုက်ဆုတောင်းခြင်း၏အရေးကြီးမှု။ လုကာ ၁၈း ၈
၂။ ဒုတိယအချက်၊ ဆုတောင်းအစည်းအဝေးအရေးကြီးမှု။မဿဲ ၁၈း၁၉- ၂၀
၃။ တတိယအချက်၊ “တညီတညွတ်တည်း” ဆုတောင်းခြင်း၏အရေးပါမှု။ တမန်တော် ၁း ၁၄ ။